အနုပညာနှင့် ဖန်တီးခွင့် | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
အနုပညာနှင့် ဖန်တီးခွင့်	Posted by mm thinker on September 30, 2008
Posted in: Existence Magazine, Perspective.	Tagged: Editorial.	Leaveacomment
ရင်ဘတ်ဖြင့် ရေးခြင်းနှင့် ”လုပ်ရေးခြင်း” သည် လည်း အထူးတလည် စံချိန်ထိုး စိစစ်ရန်မလိုပါ။ အနုပညာ ထုတ်ကုန်က သက်သေခံပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဖန်တီးမှု လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ခုတုံးလုပ်ပြီး တဆင့်ခုန်ခြင်း အတွက် အငြင်းပွားဖွယ်လည်း မပေါ်ပေါက်သေးပါ။ မည်မျှပင် ရိုးရှင်းပါစေ၊ မည်မျှပင် ခေတ်သစ် အနံ့ မနံသည်ဖြစ်စေ ထိုရိုးရှင်းခြင်း၌ ရိုးသားမှုနှင့် အတူ အနုပညာသည် ကပ်၍ ပါနေပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းကို ရှာဖွေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဖွဲ့တည်ရာကို နေရာခင်းဖြန့်ထားပါ သည်။ အားလုံးသော ဖြစ်တည်မှုကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ လူတိုင်းသည် သူ့ဘ၀နှင့်သူ ဇာတ်လိုက်ဖြစ်ကြပါ သည်။ အနုပညာတွင်လည်း လူတိုင်းသည် ဇာတ်လိုက် ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသည်။ သူတို့၏ အနုပညာသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် အသုံးတော်ခံရန် ဇာတ်စင်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူပါသည်။ အနုပညာကို တိုင်းမည့် ပေတံ၏ တိကျမှု၊ သတ်မှတ်ပေးနိုင်မှုတို့ကို မယုံကြည်ဘဲ ဖြစ်တည်လာမှုများ၏ အဇ္ဈာသယများကိုသာ ဂရုဓမ္မပြုပါကြောင်း။
အယ်ဒီတာ ဖွဲ့တည်ရာ (Existence) မဂ္ဂဇင်း
← သင်ကာ ခရီးသွားနေသည်	Existence Magazine – Vol.1, Issue.5 – Download →	0 comments on “အနုပညာနှင့် ဖန်တီးခွင့်”
မစ်(စ်)သွန်းသွန်း on September 30, 2008 at 12:34 pm said:
Reply	ShwunMi_ရွှန်းမီ on September 30, 2008 at 6:33 pm said:
Reply	ကောင်းကင်ကို on October 1, 2008 at 3:28 pm said:
Reply	Thet Su on October 2, 2008 at 9:54 pm said:
Reply	BLACK DREAM on October 4, 2008 at 3:30 am said: